Ciidanka Booliska oo gacanta kusoo dhigay Askari dil ugeystay Darawal Mooto bajaaj | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidanka Booliska oo gacanta kusoo dhigay Askari dil ugeystay Darawal Mooto bajaaj
Ciidanka Booliska oo gacanta kusoo dhigay Askari dil ugeystay Darawal Mooto bajaaj
Taliye Kuxigeenka Ciidanka booliska Soomaaliya Jenaraal Sakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in Ciidamada Booliska ay soo xireen askari boolis ah, kaasoo saaka degmada Hodan ku dilay Wiil dhalinyaro ah oo watay Mooto Bajaaj.
Janaral Sakiya oo qoraal kooban soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayey ku sheegtay in an la ogolaan doonin in askarta ay dhibaato u geystaan Shacabka, waxaa ay sheegtay in sharciga la hor keenayo Askariga geystay dilka.
shanka kale dhaawac ayaa kasoo garay qof kale oo ka agdhawaa Isgoyska Tarabuunka oo ah halka ay toogashada ka dhacday.
“Ciidanka Booliska ayaa gacanta ku soo dhigay askari boolis ah oo maanta darawal mooto Bajaaj ku dilay qof kalena ku dhaawacay Tarabuunka, sharciga ayuu hortagi doona” ayey tiri Taliye Zakiya.
Tallaabadan ayaa noqoneysa mid u doonayo Taliska Booliska in u kula xisabtamo askarta ka tirsaan dowladda ee shacabka waxyeelysa ,iyadoo looga hor tagayo dilalka loo geysto darawalada Mooto bajaajta,ciidanka nabad galyada ayaa gacanta ku soo dhigay askariga ku lugta leh falka lagu dilay darawalka Mootada lana soo taago Maxkamad.
Previous articleWasiirka Cusub ee Warfaafinta oo maanta xilka la wareegay
Next articleDhahar oo caawa u gudbTay wareegga labaad ee tartanka Cilmiyeedka Bisha Ramadan